बालुवाटारमा बन्यो प्रचण्ड विरोधी दस्ता, कसले गर्दैछन् नेतृत्व ? — Imandarmedia.com
बालुवाटारमा बन्यो प्रचण्ड विरोधी दस्ता, कसले गर्दैछन् नेतृत्व ?
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डले बार्गेनिङ गर्न लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड विरोधी दस्ता तयार पारेका छन्।
प्रचण्डले विभिन्न राजनीतिक नियुक्तीमा अस्वभाविक भागबण्डा खोजेको, राजदूत नियुक्तीमा पनि दवाव दिएको, स्थानीय निर्वाचनमा पनि धेरै पालिकामा नेतृत्व खोजेको भन्दै देउवाले गगन थापाको नेतृत्वमा प्रचण्ड विरोधी दस्ता बनाएका हुन्।
यो दस्ताले नेकपा माओवादी र प्रचण्डको अप्रत्यक्ष रुपमा भण्डाफोर गर्ने म्याण्डेट पाएको छ। प्रचण्डलाई अहिलेभन्दा केही कमजोर बनाउन सके देश कांग्रेसमय बन्ने निचोडका साथ देउवाले यो संयन्त्र बनाएको श्रोतको दावि छ।
यो संयन्त्रलाई गोप्य राखिएको छ। अमेरिकाको ग्राण्ड डिजाइनमा सदस्यहरुको नाम गोप्य राख्दै गगन थापालाई संयोजक तोकिएको बालुवाटार श्रोतको भनाई छ।यसको सुरुवात प्रचण्डले एमसीसीमा गरेको बार्गेनिङबारे एउटा पुस्तकनै प्रकाशन गरेर भएको छ।
उक्त पुस्तकमार्फत अमेरिकी सहयोग परियोजनाबारे प्रचण्डले लुकाएका कुराहरु तथ्यगत रुपमा सार्वजनिक गरिएको छ।यो पुस्तकले नजिकिदै गरेका चुनावलाई प्रभावित पार्न सकिने कांग्रेसको विश्लेषण छ।
प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एक महानगरपालिका, पाँच उपमहानगरपालिका, दुई सय ५० नगरपालिका/गाउँपालिकाको मेयर/अध्यक्ष र त्यही संख्यामा उपमेयर/उपाध्यक्ष माग गरेका छन्। देउवाले यसमा केही पनि जवाफ दिएका छैनन्।
बरु गगन थापामार्फत बार्गेनिङ गर्न गठबन्धन गर्न नसकिने बकाइरहेका छन्। प्रचण्डलाई विच्कायो भने पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्ने खतरा छ। नविच्काइकन उनलाई साइजमा ल्याउने सभापतिको रणनीति छ। नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने।
‘जसरी पनि प्रचण्डलाई साथमै लिएर डाउन पार्न सकिन्छकी भनेर केही काम भइरहेका छन्। तपाईँ देखिरहनुभएको छ, अहिले पनि देश प्रचण्डकै वरिपरी घुमिरहेको छ। फेरी पनि त्यो खतराबाट मुक्त हुन सभापति सचेत हुनुहुन्छ।
आफू विराधी दस्ता तयार भएको सूचना पाएका प्रचण्डले पनि चुनाव एक्लै लड्न पर्ने परिस्थिति आउन सक्ने बताउन थालेका छन्। उनले पार्टीको उपस्थिति राम्रो भएकोले तालमेल हुनैपर्छ भन्नेमा आफू नरहेको समेत बताएका छन्।
‘कतिपय ठाउँमा अन्तिम अवस्थामा तालमेल हुनसक्छ। तर हामी आफैं बलिया छौं भने किन डराउनू प्रचण्डले काठमाडौँमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भने, ‘गठबन्धनबाट आश गरेर जितौंला र खाउँला भन्ने दिमागबाट हटाइदिनुस्।
गठबन्धन हुन्छ, उनीहरूले हामीलाई छोड्छन्, हामीले चुनाव जित्छौं र हामी फेरि भोलि पनि राम्रै पोजिसनबाट हुन्छौं भन्ने दिमागबाट हटाइदिनू।प्रचण्डले भने, ‘हामी आफैं नमरी स्वर्ग देखिँदैन। आफ्नै खुट्टामा, आफ्नै तागतको बलमा हामीले चुनाव जित्छौं,
भन्ने आत्मविश्वासको साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले सबैले यो लडाइँ जित्न सबै तागत लगाउनुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझ्न जरूरी छ। दुइटा बुर्जुवा पार्टी एमाले–कांग्रेस पालैपालो शासन गर्ने र अरूलाई सिध्याउने षडयन्त्र भएको छ।
तेस्तै,नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटोबाट मुख्यमन्त्री बनेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको एउटा निर्णय विवादिन बनेको छ। निर्णय विवादित मात्र बनेको छैन् निर्णय सच्याउन भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन आएकाहरुलाई अपमान समेत गरेका छन्।
बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्ने तयारी भएको प्रादेशिक विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारले हालै कपिलवस्तुमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै बाँकेका जनप्रतिनिधिले मुख्यमन्त्री केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन खोजेको थियो।
तर आफूहरुलाई समय नदिएको ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा रहेकी लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै पूर्वमन्त्री आरती पौडेलले बताइन् ।मुख्यमन्त्रीलाई सोमबार नै टेलिफोनमार्फत समय माग गरेर भेट्न बुटवल आएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कुराएर आउँदै नआई कपिलवस्तु जानुभएछ।
पूर्वमन्त्री पौडेलले भनिन्, समय दिएर पनि भेट नै नगर्नुले मुख्यमन्त्रीले अपमान र बेवास्ता गरेको महसुस भएको छ। मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले भने अपर्झट काम परेर कपिलवस्तु जानु परेकाले भेट दिन नसकेको दावी गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीले भेट नदिएपछि कपिलवस्तुमै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत पक्षपतिले बताए ।अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको प्रदेश विश्वविद्यालय खजुरा–८ रनियापुरमा स्थापना गर्ने निर्णय विरुद्ध मुख्यमन्त्री केसी र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीको योजनामा खजुराबाट अन्यत्र सार्ने तयारी भएको अध्यक्ष कक्षपतिले टिप्पणी गरे।
विश्वविद्यालय बाँकेबाट अन्यत्र सार्ने तयारी भएसँगै बाँके र बर्दियामा पूर्वमन्त्री आरती पौडेलको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनको तयारी छ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष क्षेत्रीले अघिल्लो साता पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश विश्वविद्यालय खजुरामा राख्न अनुपयुक्त रहेको भन्दै दाङको बंगलाचुली वा कपिलवस्तुको बहादुरगञ्जमा जग्गाको खोजी भइरहेको बताएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा तीन करोड, ०७७/०७८ मा सात करोड र चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ।
विश्वविद्यालयका लागि जग्गा छुट्याउने काम समेत भइसकेको अवस्थामा अन्यत्र सार्न खोज्नु गैरजिम्मेवार हुने खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपतिले बताए।
अध्यक्ष कक्षपतिले विश्वविद्यालय खजुराबाट अन्यत्र लैजान मुख्यमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षले षड्यन्त्र गरेको भन्दै त्यसलाई पूरा हुन नदिने बताए।